Himalaya Dainik » श्रीमतीले सिन्दुर नलगाउनुको अर्थ यस्ताे रहेछ !
श्रीमतीले सिन्दुर नलगाउनुको अर्थ यस्ताे रहेछ !
भारतको गुवाहाटी हाइकोर्टले श्रीमतीले सिन्दुर र चुरा लगाउन अस्विकार गर्नुको अर्थ उनी आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई जारी राख्न नचाहेको भन्ने बुझिन्छ साथै यसलाई सम्बन्धविच्छेद दिने आधार पनि मानेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार एक व्यक्तिले गुवाहाटी हाइकोर्टमा सम्बन्धविच्छेदको याचिका दर्ता गरेका थिए ।
यसमा चीफ न्यायाधिस अजय लाम्बा र न्यायधिस सौमित्र सैकियाले श्रीमतीले सिन्दुर लगाउन अस्विकार गर्नुलाई एक प्रमाणको रुपमा मानेका थिए । श्रीमतीले सिन्दुर नलगाउनुको अर्थ उनी वैवाहिक जीवन अघि बढाउन नचाहेकाे बताउछिन् ।
अदालतले यस्तो अवस्थामा श्रीमान् श्रीमतीसँग बस्नु महिलाद्वारा श्रीमान् र उनको परिवारलाई प्रताडना दिएको मानिनेछ । ‘फ्यामिली कोर्टले मूल्याङ्कनमा गल्ती गर्यो’ फ्यामिली कोर्टले यो मामिलामा प्रमाणको मूल्याङ्कन सही दिशामा नगरी गल्ती गरेको अदालतले बताएको छ ।